विश्वकप कसले जित्छ जस्तो लाग्छ ? किन ? - अब हाम्रो पालो - प्रकाशितः असार ६, २०७५ - साप्ताहिक
ब्राजिलले जित्छ ।
पोर्चुगलले जित्छ ।
नवीन अधिकारी, उत्तम थापा
म ब्राजिलको समर्थक, जिते पनि हारे पनि ब्राजिलले नै जित्छ भन्छु ।
जसले जे भने पनि यसपालि बेल्जियमले विश्वकपको ट्रफी उचाल्नेछ ।
अरूले जे भने पनि अन्त्यमा स्पेनले जित्छ ।
युक्रेनले जित्छ ।
सबै यो र त्यो भन्दै गफ गर । कपचाहिँ फुत्त स्पेनले लानेछ अनि चाल पाउँछौं ।
जसले जिते पनि बाल मतलब । बेकारको निद्रा हराम अनि स्वास्थ्यमा असर । रेस्टुराँ गएर हेर्दा धनको नाश । आफ्नो काम नगरी हुँदैन । बरु त्यो समय उपयोग गरेर काम गर्दा एक छाक टार्न पुग्छ ।
जापानले जित्छ, गोल हानेरै जित्छ ।
ब्राजिल र पोर्चुगलमध्ये एकले जित्छ ।
फ्रान्सले जित्छ किनभने फ्रान्समा ग्रिज्मन, पोग्बा, भराने, येम्बापेजस्ता खेलाडी छन् । फ्रान्ससँग युवा जोस–जाँगरले भरिएको टिम छ ।
मेरो विचारमा अर्जेन्टिनाले जित्छ ।
जर्मनीले जित्नेमा कुनै शंका छैन ।
ब्राजिलले, किनभने टिममा राम्रा खेलाडी छन् ।
सुमन मिश्र, प्रदीप सुवेदी
ओल्ड इज गोल्ड, त्यसैले ब्राजिलले जित्छ ।
जर्मनीका अगाडि सबै भुराभुरी हुन् । जर्मनीले नै जित्छ ।
एउटा हल्ला गर्छ जर्मन भन्दै, अर्को हल्ला गर्छ ब्राजिल भन्दै, अनि कुनै–कुनै छाउरा निस्कन्छन् पोर्चुगल भन्दै, तर अन्तिममा जित्नेचाहिं अर्जेन्टिनाले हो । अर्जेन्टिनालसँग फाइनल खेल्न पाउने पो कुन भाग्यमानी देश होला ?
अवश्य पनि ब्राजिलले जित हात पार्छ ।
पोर्चुगलले जित्छ भन्ने विश्वास छ ।
डेनमार्कले जित्छ ।
फ्रान्सले जित्छ । ऊसँग बलियो टिम छ ।
खै, यही त दोधारमा छु— कसले जित्छ भनेर । अलिक विश्वासिलो आधार भए सट्टा खेलौं भनेको ?
साउदीले जित्नैपर्छ ।
स्पेनले जित्छ होला ।
भ्रष्टाचार र सुन तस्करीको विश्वकप हुने भए नेपालले जित्थ्यो ।
२०१८ को वल्र्ड कप ब्राजिलले जित्छ ।
अर्जेन्टिना । मेसीको टिमका सबै सदस्यमा उपाधि जित्ने भोक छ । दुई पटक कोपा र एकपटक विश्वकप फाइनल हार्नुको पीडा बिर्सनु छ ।
अर्जेन्टिनाले जित्छ, किनभने अहिले उनीहरूको टिम राम्रो छ ।
नेदरल्यान्ड र फ्रान्समध्ये एउटाले जित्छ ।
मेसीजस्ता होनहार खेलाडी भएकाले अर्जेन्टिनाले जित्छ ।
अरूभन्दा जर्मनीको टिम राम्रो छ । त्यसैले यसपालि जर्मनीले जित्छ ।
यो कुरा फाइनल हेरेपछि मात्र भन्न सकिन्छ, अहिले नै भन्न सकिँदैन ।
जहाँ युवा खेलाडीहरूको बाहुल्यता छ उसैले जित्छ ।
फ्रान्सले जित्छ ।
खेल त सबै देशको राम्रो छ, तर मचाहिं ब्राजिलको समर्थक भएकाले ब्राजिलले नै जितोस् भन्ने चाहन्छु ।